Shiinaha Dhalo Dhuxul Caadiga ah Madhan Saliida Saliidda Marasca 750ml Dhalo Dhalo ah oo leh warshad ugu sarreysa iyo soosaarayaasha | Luhai
dhalo caadi ah Madhan Olive Oil Saliid Marasca 750ml Dhalo Dhalo leh kor fur
Qabashada dusha: Decal
Isticmaalka Warshadaha: Cabitaan
Waxyaabaha aasaasiga ah: Muraayadda
Qalabka Jirka: Muraayadda
Qalabka Koolar: Muraayadda
Nooca wax lagu xiro: FARANKA CAP
Isticmaal: Daawada dareeraha ah
Awoodda: 250ml / 500ml / 750ml / 1000ml
Isticmaal: Saliid saytuun ah
Koofiyad: Ku marooji
Qaab: Barxad ama Wareeg
Muunad: Waa la aqbali karaa
Shahaadada: SGS / ISO9001
Nooca Xirmada: Muunadda waxaa lagu buuxin doonaa warqad xumbo iyo sanduuqa kartoonka.
1.Sample: ku xirxirida xumbo + kartoonno
1) Ku xirxirida balastarrada si toos ah
2) Ku xirxirida kartoonada (aqbal kartoonada caadada loo sameeyay)
3) Ku xirxirida santuuqa + kartoonada (aqbal kartoonada sida gaarka loo sameeyay)
Fulinta iibsadaha ayaa ah diiradeena koowaad. Waxaan taageernaa heer joogto ah oo xirfad-yaqaannimo, tayo sare leh, kalsooni iyo adeeg loogu talagalay Soo-saaraha Shiinaha 750ml Custom Clear Frosted Glass Olive Oil Dhalo leh Coork, Iyadoo la adeegsanayo ujeedada weligeed ah ee "hagaajinta tayada joogtada ah, qanacsanaanta macaamiisha", waxaan hubnaa in sheydeenu aad u fiican tahay waa aamin oo mas'uul ah oo alaabtayada iyo xalalkayagu ay yihiin kuwa ugu iibinta badan gurigaaga iyo dibaddaba.
Soo-saaraha Shiinaha Dhalooyinka Madhan ee Khamriga Khamriga iyo qiimaha Dhalooyinka Khamriga, Iyada oo leh tiro ballaadhan, tayo fiican leh, qiimayaal macquul ah iyo naqshado casri ah, baayacmushtarigeenna ayaa si ballaadhan loogu isticmaalaa meelaha caamka ah iyo warshadaha kale. Wax soo saarkayagu si ballaaran ayaa loo aqoonsan yahay oo ay ku kalsoon yihiin dadka isticmaala waxayna la kulmi karaan si joogto ah horumarinta baahiyaha dhaqaale iyo bulsho. Waxaan soo dhaweyneynaa macaamiisha cusub iyo kuwa duugga ah ee ka kala socda qeybaha kala duwan ee bulshada si ay noola soo xiriiraan xiriiryada ganacsi ee mustaqbalka iyo gaaritaanka guul wada jir ah
Q1: Sideen ku heli karaa tijaabooyinka qaar?
Waxaa sharaf noo ah inaan kuu soo bandhigno shaybaarro ahaan shuruudahaaga.
A. Wixii alaab kayd ah, muunad bilaash ah laakiin waa inaad bixisaa kharashka dirista.
Badeecadaha cusub, waxaan samaysan karnaa shaybaarro sida aad ujeceshahay Laakiin waxaan jeclaan lahayn inaan ka qaadno qiimaha muunada, taas oo laga jari doono markii amarka la xaqiijiyo
Tani waxay kuxirantahay nooca badeecada aad dalbatay.
A.Waxyaabaha qaar oo aad isugu eg sida alaabtayada ugu muhiimsan iyo amarka tirada yar, waqtiga dhalintu waxay noqon kartaa uun 7-15 maalmood.
B.Waxay qaadan doontaa 25-30 maalmood oo shaqo amarka tirada rarka weelka caadiga ah.
Q3: Ma sameyn kartaa OEM?
J: Haa, waan samayn karnaa alaabada OEM. Naqshadeynta qaabaysan, qalabka, cabbirka, midabada, iwm Farshaxan ayaa loo baahan doonaa. Waxaan si taxaddar leh u ilaalin doonnaa naqshadaha, astaamaha, astaamaha macaamiisha.
S4: Maxaad u baahan tahay si aad u bixiso sicir?
J: Sharaxaadda qurxinta, sida nooca, cabbirka, midabka / dhammaadka, awoodda, miisaanka, farshaxanka, iyo tirada aad rabto.
B: Shuruudaha ganacsiga, sida inaad u baahan tahay qiimaha FOB ama CIF, haddii CIF, fadlan noo sheeg dekedda aad aadeyso.
Q5: Maxay yihiin faa'iidooyinka alaabadaadu?
J: Tayo wanaagsan iyo qiimayaal tartan leh.Shirkad xakamayn tayo leh inta lagu gudajiro geeddi socodka soosaarka.Koox shaqo kooxeed xirfadlayaal ah: Naqshadeynta, Horumarinta, Soosaarida, Isugeynta, Xirxirida iyo rarka.
Hore: Baakad madhan oo Baako Jumlo ah 1 Caleen Casiir ah Cab Dhalo Caano
Xiga: Dhalo 250ml 500ml 750ml Dhalo hufan Saliid Dhalo ah oo Saliid ah oo leh Dhalada Birta ah
Dhalo Glass Olive Oil Dhalo
250ml 500ml 1000ml dhalo galaas caano saafi ah oo leh ...
330ml jumlada dhalo biir galaas saafi ah oo leh ...
250ml 330ml 500ml 1000ml amber biir galaas madhan ...
Faaruq ah oo cad Amber Glass Beer Gunta ...
Jumlada Dhamaan Noocyada Frosted Madhan Bordeaux R ...
250ml 500ml 750ml Dhalo Square Transparent Edi ...